Baraha Bulshada Yaa Looga Baahan Yahay? | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Ilhaan Ciise Maxamed — December 17, 2019
Marka aan si fiican u fiirinno guud ahan bulshada dhinacyadeeda kala duwan waxaa si fiican innoogu muuqanaya in baraha Bulshada ey ku xoog badan yihiin dhanka taban ama fididda xumaha waliba si dhaqso ah.
Baraha Bulshada waxa ey u taaganyihiin geedihii kala duwanaa ee lagu doodi jiray, kuwii garta lagu goyn jiray, jarta lagu ciyaari jiray, kuwii caweyska habeenadii lagu tumi jiray (kama Hadlaayo maxalaal baa mise xaaraan), guud ahaan geedaha hoostooda waxaa ku kulmi jiray bulshada nuucyadeeda kala duwan oo isugu jira duqow iyo dhallinyaroba.
Hadaba u fiirso shaqada lagu qaban jiray geedihii hore kama muuqan wax kabaxsan nolol hooseyso oo aan hadaf lahayn marka loo fiiriyo dhallinyarada geedahaas ku kulma howlahooda gaarka ah oo ey kahadli jireen, Haddaba farqigu muxuu yahay?,
Farqiga u dhaxeeya dhallinyaradii hore iyo kuwa hadda ku-kulma Geedaha casriyeysan ee lagu magacaabo baraha-Bulshada (Social Media)??
Aan usoo noqanno su’aasheennii koowaad ee ahayd Baraha Bulshada Yaa Looga Baahan yahay?
Xaqiiqdii su’aashaan jawaabteedu waa mid noowada taalla, kaliya waxa aan ubbaahannahay in aan u fiirsanno sida ey wax uga socdaan aageenna iyo meelaha aan ku kulanno.
Dabcan sababta keentay in xumaha uu sidhaqso ah u fido waxa ey noo fasiri kartaa heerka fahanka togan ama toosan ama heerka hab fikirka dhalinyaradeenna.
Waxa aan hubaa in baraha bulshada looga baahan yahay dad ku xooggan soo gudbinta waxa wanaagsan waliba dad isku xiran oo awood maskaxeed leh iyo hal-abuur wanaagsan, kuwaas oo kaqeyb qaata hurda ka-kicinta Bulshada qeybaheeda kala duwan, maahan dadka oo dhan ee waa qeyb inta huradda, waxaana loo baahanyahay in ey toosiyan inta soojeedda oo aad adiga kow katahay Aqriste.
Waan hubaa in ey jiraan dad badan oo aad adiga kamid tahay aqristow oo aad uwanaagsan kuna howlan hormarinta Diinta, Dalka &Dadkaba.
Tags: Baraha Bulshada Yaa Looga Baahan Yahay?
Next post Waa Kumaa Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil Haruun?
Previous post Cilmiga Sayniska, Dhulku Ma Fidsan Yahay?